Ndị nchọpụta mere ka ndị mmadụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ na nzuzo na-enwe ike igbochi ndị gọọmentị ike.
Na March 2014, Sam Burnett na Nick Feamster kpooro Encore, usoro iji nye oge nhazi oge niile nke ụwa. Iji mee nke a, ndị na-eme nchọpụta, ndị nọ na Georgia Tech, gbara ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ ume ka ha wụnye obere snippet a n'ime faịlụ ndị dị na ibe weebụ:
Ọ bụrụ na ị na-aga na ibe weebụ yana snippet koodu a, ihe nchọgharị weebụ gị ga-anwa ịchọta ebe nrụọrụ weebụ nke ndị nchọpụta na-enyocha iji mee nnyocha (dịka, ebe nrụọrụ weebụ nke òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị a machibidoro iwu). Mgbe ahụ, ihe nchọgharị weebụ gị ga-agwa ndị nchọpụta ahụ ma ọ nwere ike ịkpọtụrụ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike igbochi (nọmba 6.2). Ọzọkwa, a gaghị ahụ ihe niile a ma ọ bụrụ na ị na-elele faịlụ faịlụ HTML nke ibe weebụ. Ihe ndị a na-ahụghị na ibe ndị ọzọ a na-ahụ anya bụ ndị nkịtị na weebụ (Narayanan and Zevenbergen 2015) , ma ọ na-esiri ha ike itinye mgbalị iji chọpụta nyocha.
Onyonyo 6.2: Usoro nke nyocha nke Encore (Burnett and Feamster 2015) . Ebe nrụọrụ weebụ si malite nwere obere snippet sistemụ na-etinye na ya (nzọụkwụ 1). Kọmputa gị na-ewepụta ibe weebụ, nke na-ebute ọrụ nchọpụta (nzọụkwụ 2). Kọmputa gị gbalịrị iji nweta ọnụọgụ ihe, nke nwere ike ịbụ ebe nrụọrụ weebụ nke òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị a machibidoro iwu (nzọụkwụ 3). Ihe na-esi ísì ọjọọ, dị ka ọchịchị, nwere ike igbochi ohere ịnweta nyocha ahụ (nzọụkwụ 4). N'ikpeazụ, kọmpụta gị na-akọ ihe rịọrọ arịrịọ a maka ndị nchọpụta (egosighi na ọnụ ọgụgụ ahụ). Ejiri ya site na Burnett and Feamster (2015) , 1.
Uzo a iji nyocha ihe ndi ozo nwere ihe ndi mara mma. Ọ bụrụ na ọnụọgụ weebụ nke zuru oke gụnyere snippet a dị mfe, mgbe ahụ Encore nwere ike ịnye oge ntanetịime nke weebụsaịtị. Tupu ịmalite ọrụ ahụ, ndị na-eme nchọpụta kwurịtara na IRB, bụ ndị jụrụ ịmeghachi ọrụ ahụ n'ihi na ọ bụghị "ụmụ mmadụ na-eme nchọpụta" n'okpuru Iwu Rịpụtara (usoro nke ụkpụrụ na-achịkwa ọtụtụ ntinye ego na United States; maka nkọwa ndị ọzọ, lee ihe odide nke akụkọ ihe mere eme na njedebe nke isi nke a).
N'oge na-adịghị anya mgbe Encore kwusịrị, Otú ọ dị, Ben Zevenbergen, bụ nwa akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ, kpọtụrụ ndị nchọpụta ahụ ịjụ ajụjụ banyere ụkpụrụ omume nke ọrụ ahụ. Karịsịa, Zevenbergen nwere nchegbu na ndị mmadụ nọ na mba ụfọdụ nwere ike ịnweta ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na kọmputa ha nwara ịga na ebe nrụọrụ weebụ ụfọdụ dị mgbagwoju anya, ndị a ekwenyeghi ikere òkè na ọmụmụ ihe ahụ. Dabere na mkparịta ụka ndị a, òtù Encore gbanwere ọrụ ahụ iji gbalịa ịtụle nchịkọta nke naanị Facebook, Twitter, na YouTube n'ihi na ịnwa ndị ọzọ iji nweta saịtị ndị a bụ ihe a na-ahụkarị n'oge nchọgharị weebụ nkịtị (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Mgbe ịchọtara data site na iji imezi a gbanwere, otu akwụkwọ na-akọwa usoro ya na nsonaazụ ụfọdụ ka e debere SIGCOMM, nkwukọrịta sayensị mara mma. Kọmitii mmemme ahụ nwere ekele maka onyinye enyemaka nke akwụkwọ akụkọ ahụ, ma gosipụtara nchegbu maka enweghị nkwenye ezinyere site na ndị na-eso ya. N'ikpeazụ, kọmitii kọmitii ahụ kpebiri ibipụta akwụkwọ akụkọ ahụ, mana yana okwu nkwenye nke na-ekwupụta nchegbu omume (Burnett and Feamster 2015) . Enwetụbeghị ụdị nkwenye dị na mbụ na SIGCOMM, nke a emeela ka arụmụka ndị ọzọ gbasaa n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị sayensị gbasara ọdịdị nke ụkpụrụ omume ha (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .